The AudioSourceRE ekipa faly mamaly ny fanontanina isan-karazany. Safidio fotsiny ny fizarana mifandraika etsy ambany ho an'ny approfampahalalana momba ny fifandraisana mialoha
Raha mila fanampiana ianao amin'ny fametrahana na mampiasa ny rindray, ny toerana voalohany hanoroanay fitadiavana valiny dia anay fizarana fanohanana. Na izany aza, raha mbola mila fanampiana ianao, dia azonao atao ny mandefa mailaka fanohanana [at] audiosourcere [teboka] com
Fanontaniana mialoha ny varotra
Manana fitsapana maimaimpoana azo ampiasaina ho an'ny lohantsika isika DeMIX Pro rindrambaiko, ary koa ny antsika RePAN Plugin ho an'ny DAWs. Io dia hahafahanao manandrana ny rindrambaiko mandritra ny 7 andro mba hahitana hoe ahoana no fomba fiasa. Raha manana fanontaniana hafa ianao, toy ny fihenam-bidy be dia be, azafady azonao atao ny mandefa mailaka any amin'ny varotra [at] audiosourcere [teboka] com
Te hizara ny rindrambaiko?
Raha liana amin'ny fivarotana ny rindrambaiko izahay dia manana taratasy famotopotorana mpaninjara azonao nofenoina. Manana mpiara-miasa aminy koa izahay program ho an'ny tranokala sy / na bilaogy liana amin'ny fampifandraisana ny rindrambaiko miaraka amin'ny tahan'ny komisiona manintona, azonao ampiharina amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka amin'ny varotra [at] audiosourcere [teboka] com. Mba miangavy re promanaova fampahalalana amin'ny tranokalanao, fifamoivoizana, atiny ohatra izay nataonao ho an'ny hafa profantsona, ary koa ny mombamomba ny fifandraisana.
Raha mpikambana ao amin'ny vatan-dahatsoratra momba ny mozika ianao ary manana fanadihadihana PR, azonao atao ny mifandray amin'ny ekipa hampidirina ao amin'ny lisitray famoahana an-gazety, hangataka dinidinika amin'ny ekipa, na hangataka kopia fanaovan-tserasera amin'ny solosaina raha toa ka liana amin'ny hanao famerenana. Azafady mba mifandray amin'ny marketing [at] audiosourcere [dot] com ary ampahafantaro anay ny anaranao, ny famoahana izay iasanao, ny rohy mankany amin'ny tranokala ary ny fanontanianao, ary hanao izay azonay atao izahay hanampiana anao.
Mavitrika amin'ny fantsona media sosialy marobe izahay. Afaka manaraka anay ianao amin'ny;
Ny fomba fanao taloha
Indraindray ny olona dia mbola mila mitondra zavatra ho antsika amin'ny paositra, na amin'ny fivoriana (amin'ny fandaminana mialoha). Raha mila ny adiresy mailerantsika izahay dia
AudioSourceRE DAC, Ivotoerana Center, Bishopstown, Cork City, T12 Y275, Repoblika Irlanda